परमेश्वरमा राखिएको भरोसाले दोब्बर आशिष्मा डोर्‍याउँछ – एल्डर गोपी राई : Nepali Isai Mandali
Browse > Home / Articles / परमेश्वरमा राखिएको भरोसाले दोब्बर आशिष्मा डोर्‍याउँछ – एल्डर गोपी राई
परमेश्वरमा राखिएको भरोसाले दोब्बर आशिष्मा डोर्‍याउँछ – एल्डर गोपी राई
अय्युब १, २ र ४२ अध्यायः ऊज देशमा अय्युब नाउँ भएका एक जना मानिस बस्दथे । तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे । तिनी परमेश्वरसग डराउँथे र दुष्टताबाट अलग बस्थे । तिनका सात छोरा र तीन छोरी थिए । तिनका सात हजार भेडा, तीन हजार ऊँट, पाँच सय हलगोरु र पाँच सय गधाहरू बाहेक धेरै कमारा कमारीहरू पनि थिए। पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये अय्युब सबै भन्दा महान थिए ।
तिनका छोराहरूले पालैसित आफ्नो घरमा भोज लाउँथे र आफ्ना तीन बहिनीहरूलाई खानपिनका लागि निम्त्याउँथे । भोज दिने काम सिद्धिएपछि अय्युबले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर शुद्ध बनाउने गर्थे । तिनी बिहान सबेरै उठी तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति यो विचारले एउटा एउटा होम बलि चढाउँथे, “सायद मेरा छोराछोरीले पाप गरे होलान् र परमेश्वरलाई सरापे होलान् ।” अय्युबले सधैं यसै गर्थे (अय्युब १ः१–५) ।
अय्युब त्यस जमानाका धनाढ्य व्यक्ति थिए साथै उनी परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति थिए । निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे । केही अभाव थिएन । त्यति हुँदहुँदै पनि अय्युबको कमजोरी पनि थियो । उनको कमजोरी चाहिँ छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरको डरमा हुर्कन सिकाएनन् । उनले छोराछोरीलाई परमेश्वरको डरमा हुर्कन सिकाएको भए उनीहरूले बुझ्ने थिए, परमेश्वरलाई सराप्नुहुँदैन । उनीहरूमा परमेश्वरको डर नभएको हामी थाहा पाउँछौं । त्यसैले उनीआफै भएपनि छोराछोरीहरूको लागि होम बलि चढाउँथे । छोराछोरीहरू चाहिँ सांसारिक थिए । आफ्ना बाबुमा जस्तो परमेश्वरप्रतिको भक्ति उनीहरूमा थिएन । उनीहरू भोज खाएर मोज मस्तीमा समय बिताउँथे । उनका छोराहरूले आफ्ना दिदी बहिनीहरूका लागि पालै पालो भोज लगाउँथे । जब सातै भाइको पालो सकिन्छ, तब बाबु स्वयम्ले उनीहरूको लागि होम बलि चढाइदिनु पर्थ्यो । आ–आफ्नै घरमा भोज भनेपछि सबै उमेर पुगेका थिए । बाइबलमा लेखिएको छैन कि ती छोराछोरीहरूले बलिदान चढाउँथे । यसको अर्थ आफ्नो छोराछोरीमा परमेश्वरको भक्ति छैन भन्ने अय्युबलाई थाहा थियो । त्यसैले आफैले उनीहरूको लागि होम बलि चढाउँथे किनकि बाबु आमाले आफ्नो सन्तानको भलाई नै चाहन्छन् । यसको कारण अय्युबले आफ्ना छोराछोरीलाई परमेश्वरको भक्तिमा हुर्काउन नसक्नु थियो । शैतान सधैं नै पृथ्वीमा घुमफिर गरिरहन्छ । अनि मानिसको उन्नति देखेर जल्छ । परमेश्वरका दूतको साथमा पनि हिंड्छ । परमेश्वरकै काम गर्दा पनि बडो होसियारसँग गर्नुपर्छ ।
यी सबै भइरहेको समयमा स्वर्गदूतको साथमा शैतान पनि देखापर्‍यो।जब परमेश्वरले शैतानलाई तँ कहाँबाट आइस भनी सोध्नुभयो । शैतानले पृथ्वीमा घुमफिर गर्दै आएको बताउँछ । परमेश्वरले अय्युबको प्रशंसा गर्दै के तैंले मेरा दास अय्युबलाई याद गरिस् । परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो मानिस पृथ्वीमा अरू कोही छैन (अय्युब १ः८) । परमेश्वरको प्रशंसा सुनेर शैतानले एकै सासमा उत्तर दिन्छ, त्यसै अय्युबले परमेश्वरको डर मानेका हुन् र ? तपाईंले अय्युबलाई, तिनका सबै काम तपाईंले चारैतिरबाट बार हालेर रक्षा गर्नु भएको छैन ? तपाईंले तिनका सबै काममा आशिष् दिनुभएको छ, त्यसैले तिनको गाई वस्तु देशभरि अनगन्ती बढेका छन् । तपाईंले आफ्नो हात पसारेर तिनको सबै चीजमाथि प्रहार गर्नुहोस्, तिनले तपाईंका मुखकै सामुु तपाईंलाई सराप्नेछन् । तब परमेश्वरले अय्युबको ज्यानबाहेक सबै कुरा शैतानको अधिकारमादिनुभयो (अय्युब १ः६(१२) ।
शैतानले अय्युबको प्रशंसा परमेश्वरबाट सुनेर उसलाई डाह भयो र परमेश्वरलाई विरुद्धमा उक्सायो । अधिकार पाए पछि उसले सबै क्षेत्रमा प्रहार गर्‍यो । एक दिन अय्युबका जेठा छोराको घरमा भोज भइरहेको थियो । सबै जना भोजको मोज मस्ती गरिरहेका थिए । एक जना समाचार बाहक आएर भन्छ, गोरुहरू जोतिरहेको र गधाहरू तिनीहरूका नजीकै चरिरहेका बेलाशब्बीहरू आएर गोठालाहरूलाई आक्रमण गरी मारे र सबै लगे । समाचार दिन म मात्रउम्कें । त्यो बोल्दाबोल्दै अर्को एकजनाआएर परमेश्वरको अग्नि स्वर्गबाट झरेर भेडाहरू र गोठालाहरू भष्म पार्‍यो र समाचार दिन म मात्र उम्कें । ऊ बोल्दाबोल्दै तेस्रो आएर भन्छ, “कल्दीहरूले छापा मार्ने तीन दल बनाएर तपाईंका ऊँटहरू आक्रमण गरेर लगे । तिनीहरूले नोकरहरूलाई मारे र समाचार दिन म मात्र उम्कें ।” ऊ बोल्दाबोल्दै चौथो आएर भन्छ, “तपाईंका छोराछोरीहरू आफ्ना जेठा दाईको घरमा खानपान गर्दैथिए । त्यसै बेला मरुभूमिबाट अचानक आँधीबेरी आएर घरको चारै कुनामा हान्यो र ती जवान मानिसहरूमाथि ढलेर तिनीहरूसबैलाई थिचेर मार्‍यो । समाचारदिन म मात्र उम्कें ।” यो सुनेर अय्युब उठेर आफ्नो लुगाच्याते । आफ्नो कपाल खौरे र घोप्टो परी दण्डवत गरेर भने, “म आफ्नी आमाको गर्भबाट नांगै आएँ, अनि नांगै फर्केर जानेछु । परमप्रभुले दिनुभयो अनि परमप्रभुले लानुभयो ।उहाँको नाउँ धन्यको होस् ।” अय्युबले परमेश्वरलाई दोष् लगाएर पाप गरेनन् ।
त्यसपछि अर्को दिन स्वर्गदूतहरू परमप्रभुको सामू उपस्थितहुँदा फेरि शैतान पनि उपस्थित हुन्छ । परमेश्वरले तँ कहाँबाट आइस् भनेर सोध्नुहुँदा शैतानले भन्छ, “पृथ्वीको चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ । फेरि पनि परमेश्वरले अय्युबको प्रशंसा गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, विनाकारण त्यसलाई नास गर्नलाई तैंले मलाई उस्काइस् । तर त्यसको निष्ठा अझसम्म ढलपल भएको छैन (अय्युब२ः१(३) । शैतानले उत्तर दिन्छ, चामको साटो चाम । आफ्नो ज्यान बचाउन मानिसले सबै कुरा दिंँदैन र ? आफ्नो हात पसारेर त्यसको शरीरमाचोट पुर्‍याउनुहोस् अनितिनले तपाईंकै मुखेन्जी सराप्नेछन् । परमप्रभुले भन्नुभयो, “त्यसो भए त्यो तेरो हातमा छ तर त्यसको ज्यान चाहिँ छोडिदे ।” शैतान त्यहाँबाट निस्केर गयो र अय्युबको शरीरमा पैतालादेखि शिरसम्म कष्टप्रद खटिरा उब्जाइदियो । खरानीमा बसेर शरीर कन्याउनलाई माटोको भाँडोको टुक्रा लिए । तिनकी पत्नीले भनिन्, “यति भैसक्दा पनि के को परमेश्वरको निष्ठामा अडि नै रहनुहुन्छ ? परमेश्वरलाई सरापेर मर्नुहोस् ।” अय्युब भन्छन्, “तिमीमूर्ख आइमाई जस्तै कुरा गछ्र्यौ । परमेश्वरबाट सुखचाहिँ ग्रहण गर्ने तर दुःखचाहिँ ग्रहण नगर्ने?” अय्युबले बोलेर फेरि पनि पाप गरेनन् ।
अय्युबको जीवनमा ठूलो विपत्ति आएको बेला उनकी पत्नीले समेत साथ नदिएको देख्न सक्छौं । पाप गर्नको लागि नजीककै मानिसले उक्साउँछ । अय्युब माथि आएको विपत्ति सुनेर उनका मित्रहरू एलिपज तेमानी, विल्ददशुही र सोपर नमाती भेट गर्नलाई आए । तिनीहरूले टाढैबाट अय्युबलाई देख्छन् तर चिन्दैनन् । उनीहरू आफ्ना लुगा च्यातेर रून्छन् र सात दिन सम्म उनीहरूको मुखबाट एक शब्द पनि निस्कँदैन । तर त्यसपछि सान्त्वना दिनको सट्टामा उनीहरूले अय्युबलाई विभिन्न दोषहरू लगाउँछन् । अय्युब सफाई दिन्छन् । म निर्दोष छु भनेर प्रमाणित गर्न खोज्छन् ।
तर अय्युब ४२ अध्यायमा अय्युबसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ । परमेश्वरको अघि अय्युब पश्चात्ताप गर्छन् र भन्छन्, “तपाईंले भन्नुभयो, “अबध्यानसित सुन् र म तँसँग बोल्नेछु, म तँलाई प्रश्न गर्छु र तैंले मलाई उत्तर दिनेछस् । मेरा कानहरूले तपाईंका बारेमा सुनेको मात्रथिएँ, तर अब ता म तपाईंलाई आफ्नै आँखाले देख्दछु । यसैकारण म आफूलाई तुच्छ ठान्छु, अनि धुलो र खरानीमा बसेर म पश्चात्ताप गर्दछु ।’ त्यसपछि परमेश्वरले एलिपज तेमानीलाई भन्नुभयो, “तँ र तेरा दुई मित्रहरूसँग म क्रोधित भएको छु किनभने मेरा दास अय्युबले मेरो विषयमा भनेझैँ तिमीहरूले भन्नुपर्ने ठीक कुरा भनेनौ । यसैले सात वटा साँढे र सातवटा भेडा लिएर मेरो दास अय्युब कहाँ जाऊ, र तिमीहरू आफ्ना निम्ति होम बलि चढाऊ र त्यसले तिमीहरूका निम्ति अन्तर्बिन्ती चढाउनेछ । म त्यसको प्रार्थना सुन्नेछु अनि तिमीहरूको मूर्खता अनुसार तिमीहरू सित व्यवहार गर्नेछैन, किनभने अय्युबले झैं मेरो विषयमा भन्नुपर्ने कुरा तिमीहरूले बोलेनौ ।” तब एलिपज तेमानी, विल्ददशुही र सोपर नमातीले परमप्रभुको आज्ञा अनुसार गरे र आफ्ना मित्रहरूका निम्ति अय्युबले अन्तरर्बिन्ती गरिदिँदा परमप्रभुले अय्युबको प्रार्थना ग्रहण गर्नुभयो । यसरी अय्युबले आफ्ना मित्रहरूका निम्ति प्रार्थना गरेपछि परमप्रभुले अय्युबको सुदिन फर्काइ दिनुभयो । र तिनका सबै धन सम्पत्ति पहिलेको भन्दादुई गुणा बढाइ दिनुभयो । त्यसपछि अय्युबका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र तिनका अघिका परिचित मानिसहरू आएर तिनीसित तिनका घरमा भोज गरे, र तिनी माथि ल्याउनुभएका दुर्दशाहरूका निम्ति तिनीहरूले तिनलाई सान्त्वना प्रकट गरे । अनि हरेकले तिनलाई एकएक टुक्राचाँदी र एउटा एउटा सुनका औंठी दिए । त्यसबाहेक परमप्रभुले अय्युबको जीवनको पछिल्लो समयलाई अघिल्लो समयभन्दा बढी आशिष् दिनुभयो । तिनका चौधहजार भेडाबाख्रा, छ हजार ऊँट, हजार हलगोरु र एक हजार गधाथिए । तिनका सात छोरा र तीन छोरी भए (अय्युब ४२ः४,१३) । अय्युबले पाप गरेको कारणले उसले दण्ड पाएको होइन । मानिसहरूको दृष्टिमा पापको कारण गरीबी, पापको कारणले बिरामी हुन्छ भन्ने गलत विचार छ । तर अय्युब त्यो कारणले बिरामी परेका होइनन् । तर जब परमेश्वर अय्युबसँग बोल्नुभयो । अय्युब परमेश्वरको अघि पश्चात्ताप गर्छन् । उनी भन्छन्, “मैले सुनेको मात्रथिएँ । अब मैले परमेश्वरलाई आफ्नै आँखाले देखेको छु ।” जब सान्त्वना चाहिएको थियो, त्यसबेला उनले साथीहरूबाट साथ पाएनन् । आफन्तबाट साथ पाएनन् । त्यसैले एउटा नेपाली उखान नै चलेको छ, ‘सम्पत्तिमा सबैको हाई हाई, विपत्तिमा कोही छैन दाजुभाइ ।’ हामीहरू पनि सान्त्वना र ढाडस चाहिएका बेलामा सल्लाहको नाममा, परामर्शको नाममा घनले ठोक्ने काम गर्छाैं । जब अय्युबका तीनजना साथीहरूले परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभए बमोजिम गरेपछि अय्युबले उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिए । उनीहरूको गल्तीको लागि क्षमा मागिदिए । परमेश्वरले ती सबैलाई आशिष् दिनुभयो । परमेश्वरले तीतीन साथीहरूले गरेको मूर्खता बमोजिम व्यवहार गर्नुभएन । अय्युबले दोब्बर आशिष् पाए । परमेश्वरले उनको धन सम्पत्ति दोब्बर बढाइदिनुभयो ।
परमेश्वरको उद्देश्य दण्ड दिनुहोइन, तर दुःखमा पनि साथ दिनु हो । तर मानिसको कामचाहिँ परमेश्वरलाई दोष् नदिनु र स्थिर रहनु हो ।
हामीले परमेश्वरको सामर्थ र भलाइमा भरोसा राख्यौं भने विजय त्यसैमा छ । अय्युबले राखेको भरोसाले नै उसलाई दोब्बर आशिष्को हकदार बनायो ।